Anisan’ izany ireo nanaraka ny lalam-piofanana gestion et management, ny commerce et marketing, ny droit ary ny communication. Samy notolorana mari-pahaizana avokoa izy ireo ka ho an’ireo nahazo ny DTS dia nampisalorana anarana Fijilo izy ireo raha Taratra kosa no anarana nosafidiana ho an’ireo nahazo ny mari-pahaizana licence. Ny Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena AtoaTinoka Roberto, Atoa Siteny Andrianasoloniaiko ary Rahantasoa Marie Lydia, ministry ny fampianarana teknika teo aloha no Ray mpiahy azy ireo. Nambaran-dRakotovaoarison Nadia R, tale jeneralin’ny UPRIM moa fa tsy misy ahiana ny fitadiavan’ireo mpianatra mivoaka ao aminy asa. Vao tamin’ny herinandro teo mantsy izy ireo no nanokatra ny fiaraha-miasany amin’ny banky Bni hahafahan’ny mpianatra mianatra asa sy miasa avy hatrany. Amin’ny taom-pianarana ho avy ihany koa dia hisokatra ny UPRIM any Comores, ho fanomezana fahafaham-po ny rehetra.